စက်မှုလုပ်ငန်း |
Emulsifiying Machine ဆိုတာဘာလဲ
Emulsifiying Machine ကိုလည်း လူတွေက Emulsifier Mixer Emulsifier Machine လို့လည်း ခေါ်ကြပြီး ဒါဟာ နေ့စဉ် ဓာတုဗေဒ၊ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘုံလည်ပတ်မှုယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရောနှော၍မရသောအရည် နှစ်ခုကို ရောစပ်ရန် (တစ်ခုသည် အမြဲတမ်းလိုလို ရေဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ မရောနှောနိုင်သော "ဆီ" ဖြစ်သည်...
Vacuum mixer homogenizer ဆိုတာ ဘာလဲ။
Vacuum Mixing Machine Vacuum Liquid Mixer Vacuum Homogenzing Machine Vacuum Homogenizing Mixing Tank ပစ္စည်းအား emulsification အိုး၏ အပေါ်ပိုင်း၏ အလယ်ဗဟိုတွင် မွှေပြီး teflon ခြစ်စက်သည် မွှေအိုး၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ အမြဲဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အာဝါ...
Vacuum emulsifying mixer ဆိုတာ ဘာလဲ။
တခါတရံတွင် လူတို့သည် ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်ခြင်း Vacuum Mixing Homogenizer လေဟာနယ် emulsifying mixer လေဟာနယ် ရောစပ်စက် နှင့် အခြား ဖုန်စုပ်စက် ရောစပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းသည် လေဟာနယ် အနေအထားတွင် ရှိနေသည် ၊ မြင့်မားသော shear emulsifier ကို အသုံးပြု၍ အဆင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အဆင့်များစွာကို လျင်မြန်စွာ ညီညီညာညာ ဖြန့်ကျက်ရန် အတွက် ဖုန်စုပ်စက် ဖြစ်သည် ။ .
two-stage reverse osmosis water treatment equipment တပ်ဆင်ခြင်း၏ အဓိကအချက်များ။
1. လုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ပြချက် ရေစိမ်းသည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး မာကျောမှုမြင့်မားသော ရေကောင်းဖြစ်သည်။ဝင်လာသောရေများသည် reverse osmosis ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီစေရန်အတွက်၊ အတွင်းပိုင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသောအစိုင်အခဲများနှင့် အနည်အနှစ်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် စက်အတွင်းပိုင်းရှိ quartz သဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော filter ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ပြောင်းပြန် osmosis အမြှေးပါးများလျှောက်လွှာ
လူတစ်ဦးချင်း၊ ရပ်ရွာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး သန့်စင်ထားသောရေကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် Reverse osmosis အမြှေးပါးများကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။Reverse osmosis အမြှေးပါးများသည် အနိမ့်ဆုံး ချို့ယွင်းမှုနှုန်း၊ တပ်ဆင်အသုံးပြုမှု အမြင့်ဆုံးနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းများ ရှိသည်။...
မြင့်မားသော shear emulsifier အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်